लघु खेलौना Terrier: वर्णन, व्यक्तित्व, हेरविचार र समीक्षा
धेरै मानिसहरू कुकुर छैन, तर त्यहाँ छ इच्छा अझै संसारमा सरल छैन, तर धेरै सानो र आकर्षक छ, तर - बौना खेलौना टेरियर। अक्सर, तर, उहाँलाई हेरचाह गर्न धेरै प्रश्नहरू छन्। यस लेखमा अलि मित्र प्राप्त गर्न चाहने लागि हो। गर्न लघु खेलौना टेरियर स्वस्थ भयो, राम्रो-groomed र सिक्न धेरै छ यसको सुन्दर दृश्य लागि मालिकलाई खुसी थियो।
खेलौना टेरियर र यसको भिन्न प्रकार
तपाईं एक बौना टेरियर खरिद गर्ने निर्णय गर्नु अघि, कुनै हानि इतिहास यसको मूल परिचित हुनेछ। नस्ल को रूसी र अंग्रेजी को progenitor मानिन्छ एक बौना म्यान्चेस्टर Terrier। रूसी बौना अंग्रेजी खेलौना टेरियर को क्षेत्रमा पहिलो पटक लागि अठारौँ शताब्दीको दोस्रो आधा देखियो। सबैभन्दा ठूलो लोकप्रियता उहाँले पूर्व-क्रान्तिकारी समयमा पाउनु भएको छ। त्यसपछि यी साना कुकुर भव्य परिवार बस्थे।
युद्धपछिको अवधिमा नस्ल खेलौना टेरियर टाढा कम व्यक्तिहरूलाई प्रस्तुत गरिएको छ, तर बीसौँ शताब्दीको बीचमा, कुकुर हेण्डलरहरू को धेरै काम गर्न धन्यवाद, यसलाई पुनर्जीवित थियो। त्यतिबेला अंग्रेजी बौना Terrier एकदम नस्ल को रूसी प्रतिनिधि भिन्न।
Longhair रूसी खेलौना Terrier 1958 मा उत्पत्ति। पहिलो क्लब 1996 मा गठन भएको थियो, र एक मानक दुई वर्षपछि स्वीकृत। नस्ल बौना Terrier चाँडै रूस मा व्यापक भयो, र विदेश। यो अद्भुत सिर्जना नजिक रहन र indifferent बस असम्भव बाँकी छन्।
2006 देखि, नाङ्गो र फ्लफी toychiki अनुमोदित मानक अनुसार एक रक प्रतिनिधित्व गर्न आएका छन्, र, यो रूसी खेलौना टेरियर भनिन्थ्यो। यो समयमा, जनावर एक समूह कोठा वा सजावटी कुकुर पर्छ।
एक मिनी-toychika को उपस्थिति को विवरण
कुकुर प्रजनन बारेमा धेरै थाहा नगर्ने मान्छे, त्यस्ता खेलौना टेरियर रूपमा लघु जातिहरु भ्रमित। लघु Pinscher, उदाहरणका लागि, र धेरै सानो कद को यी विभिन्न प्रकारका अन्य प्रतिनिधिहरु। तपाईं राम्रो हेर्न भने, तपाईं चट्टानको एकदम भिन्न छन् याद हुनेछ।
यसको उपस्थिति द्वारा प्रमाणित आनन्द मानिसहरूलाई वरिपरि, ल्याउन - लघु खेलौना टेरियर एक सृष्टि, जो को मुख्य उद्देश्य हो। , हिउँदमा यो "zapazushnoy" भनिन्छ गर्न सकिन्छ गर्मी मा - "Underarm": यो सामान्यतया यो 'खल्ती' कुकुर छ कि विश्वास छ, तर यो सबै सिजन निर्भर हुनेछ। आफ्नो खल्ती मा ले बस अप्ठ्यारो अनुग्रह छ।
लघु खेलौना टेरियर - कुकुर किनभने स्लिम, सीधा अगाडि र पछाडिको limbs को मृगको बच्चा संग एक ठूलो समानता भएको। यो धेरै शिष्ट, जो सारा संसार मा सानो कुकुर रूपमा 681 ग्राम को एक वजन संग रेकर्ड को गिनीज बुक मा दर्ता गरिएको छ छ। 18-26 सेमी - कहिलेकाहीं जसको वजन withers मा दुई किलोग्राम र उचाइ गर्न 900 ग्राम देखि दायराहरू टेरियर्स, को वयस्क छन्।
रूप सुन्दर लघु निम्न सुविधाहरू द्वारा विशेषता छ:
• एकदम सजिलो कंकाल।
• छाती पनि व्यापक।
• शिर उच्च खोपडी संग, सानो छ।
• एक सानो अगाडि फैलयो चुच्चा ड्राई थूथन।
• आँखाहरु आश्चर्यजनक ठूलो हो, convex, गाढा।
• कान ठूलो हो, ठाडो।
• गले लामो।
सँगै उमेर परिवर्तनहरू कुकुर र यसको उपस्थिति छ। toychika विभिन्न रंग छन्, तर कोट रंग कालो वा खैरो रंग छ प्राय भन्दा। महिलाहरुको देखि पुरुषहरु भेद गर्न पशु गरेको व्यवहार मात्र सम्भव छ। रूसी लामो-haired खेलौना टेरियर र लघु shorthaired टेरियर: अहिले, चट्टानहरू दुई प्रकार छन्।
आयु supersmall घरपालुवा जनावरहरूले कुकुर को औसत आकार, र 12-15 वर्ष भन्दा धेरै साना हुन्छन्। तर यो अवधिमा एकदम यस्तो सानो प्राणीहरूको लागि लामो छ।
कसरी लघु खेलौना टेरियर को प्रकृति छ?
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरित्र विशेषता बौना खेलौना tererchikov अन्य लघु कुकुर distinguishes कि, नम्रता छ। यो कोमल शान्त सिर्जना, कहिल्यै मालिकसँग एक्लै हुन र आफ्नो हात मा बस्न मौका सम्झना गर्छन। जब कुकुर व्यक्ति छैन मुड मा, यो मालिक मदत गर्न तयार छडी कि, तर सधैं र खतराबाट उहाँलाई बचाउन देख्नुहुन्छ। यहाँ, स्पष्ट टेरियर्स को साहस र समर्पण व्यक्त गरे। एक पनि सक्रिय र हँसिलो छन् भनेर थाहा हुनुपर्छ, त्यसैले मान्छे संग बारम्बार संचार आवश्यकतालाई।
यो मर्यादा संग नस्ल को प्रतिनिधिको आवास गार्ड सहित भनेर विश्वास गर्न गाह्रो छ, तर यो साँचो हो। निष्कपटता र दया सबैभन्दा toychikov पाल्तु जनावर परिवार, आफ्नो हँसिलो स्वभाव तिनीहरूले मानिसहरूलाई घूस बनाउन। किनभने आफ्नो राम्रो अनुहार को विशेष लोकप्रिय लघु योर्कशायर टेरियर प्रयोग गर्दछ।
सही पिल्ला बौना टेरियर कसरी चयन गर्ने?
को टेरियर को खरीद - रूपमा सजिलो छैन यो देखिन्छ रूपमा। यो महत्त्वपूर्ण घटना कुकुर मालिक भविष्य जीवन निर्धारण गर्नेछ। आखिर, यो पिल्ला पछि, स्वस्थ हँसिलो थियो र अनावश्यक समस्या प्रदान गर्नुभएको मनमोहक थियो। यी इच्छा सबै पूरा गर्न केही समय खर्च गर्न छ।
निश्चित एक पिल्ला खरीद गर्नु अघि, के हेर्न जान्नु आवश्यक:
• जनावर को बाहिरी निरीक्षण, साथै यसलाई कसरी व्यवहार पालन गर्न।
• यो तिनीहरूले सक्रिय चंचल र अतिथि प्राप्त गर्न खुसी हुनु आवश्यक छ आफ्नो सानो भाइ र फोहर फाल्न को बहिनीहरू ध्यान आवश्यक छ।
• पिल्ला आमाबाबुले, किन्न अभिप्राय गर्ने बारेमा पूछताछसजिलो।
र अझै पनि खेलौना टेरियर लिन लाग्छ जो ब्रीडर, सजग हुन आवश्यक छ। उहाँले एक राम्रो व्यक्ति हुनुपर्छ।
लघु खेलौना Terrier: मूल्य
यस्तो पाल्तु जनावर, लागत यो मास्टर यो रोचक सजावटी कुकुर, मात्र बन्न चाहने धेरै मान्छे को लागि रहन्छ, धेरै उच्च छ एक पाइप सपना। नस्ल को प्रतिनिधिको लागि यस्तो prohibitive मूल्यहरु को कारण संदिग्ध बाँकी छन्।
एक ब्रीडर रेखाहरू एक पिल्ला किन्न राम्रो। यो सही व्युत्पत्ति पशु, राम्रो स्वास्थ्य, साथै स्वीकार्य लागत सुनिश्चित गर्नेछ। च्याम्पियन्स - ठूलो मूल्य जसको आमाबाबुले प्रजनन, को लागि अभिप्रेरित कुकुर हुनेछ। यो पिल्ला 24,000 rubles देखि खर्च हुनेछ। यो परिवार को बस एक मित्र छ भने, तपाईं 10 हजार rubles को लागि यो खरिद गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं पिल्ला बलियो भयो किनेको र सिद्ध स्वास्थ्य भए, त्यो ठीक भोजन व्यवस्था गर्नुपर्छ। एक स्थायी सीट खुवाउने विनियोजन गर्नुपर्छ। Puppies, जसको उमेर 1.5-3 महिना छ, एक दिन खुवाउनुभयो पाँच पटक, तीन महिनाका छ महिना लागि, पशु feedings संख्या2पटक (बिहान र साँझ) हुनुपर्छ, एक दिन तीन पटक र6महिना खुवाउनुभयो हुनुपर्छ।
कुकुर शाकाहारी हौं छैन, त्यसैले आवश्यक आफ्नो मेनू मा मासु समावेश गर्नुपर्छ। शक्ति चिप्स, खेलौना हुन ठीक सन्तुलित हुनुपर्छ, सुनिश्चित गर्न कि पशु को उचित विकासको लागि यति महत्त्वपूर्ण छन् भनेर सबै फीड। कुकुर प्राप्त गर्नुपर्छ:
• पशु बोसो को आवश्यक रकम।
• आवश्यक बोट पदार्थ।
• पर्याप्त मात्रा मा भिटामिन।
• खनिज र hydrocarbons।
हाम्रो समय मा अझै छ जो आफ्नो पाल्तु जनावर लागि खाना को सही चयन सजग मालिक, दोकान मा एक तयार-सन्तुलित खानेकुरा किन्न सक्नेछन्।
मूलतः toychiki शायद सर्दी उजागर, एकदम राम्रो स्वास्थ्य छ। लामो-बस्ने मानिन्छ हुनत उनि पनि पुरानो उमेर, तरुण नजर छन्। तर हामी नस्ल बौना Terrier धेरै सानो र नाजुक बिर्सनु हुँदैन। विशेष गरी समय खुवाउने समयमा सबै आवश्यक पोषक, भिटामिन र खनिज प्राप्त नगर्ने ती लागि, टेरियर्स भाँचिएको खुट्टा हुन्छ कि अधिकांश समय।
limb भंग, लघु कुकुर खतरा र अन्य चोट लागेको बाहेक। पनि सानो पाल्तु जनावर कहिलेकाहीं सही रोग निदान गर्न असम्भव, थप उपचार पूरा गर्न। सानो कुकुर भारी inoculation ग्रस्त छ। यसको लागि तिनीहरूलाई दबाइ नियम आवश्यक सही गणना मा कठिनाई देखिन्छ।
मिनी-कुकुर को सुविधाहरू हेरविचार
खेलौना टेरियर सरल हेरचाह। तिनीहरूले सजिलै ट्रेमा हिंड्न प्रशिक्षित गर्न सकिन्छ। सम्पर्क तिनीहरूलाई एक एलर्जी कारण छैन। एक महिना कुकुर दिइएको हुनुपर्छ पटक समसामयिक तिनीहरूलाई trimming, सल्फर को संग्रह रोक्न र निरीक्षण नंग्रा बनाउन lugs।
एक सानो चमत्कार आँखा बारेमा बिर्सनु हुँदैन। केही पानी न्यानो मा डूबा एक कपास swab संग, यो आँखाबाट छुट्टी को भागहरु हटाउन आवश्यक छ। विशेष ध्यान गुदा ग्रन्थीहरूको आवश्यक छ। तिनीहरूले एक कुकुर गरेको चिलाउनु गराउँछ कि संचित तरल पदार्थ छूट हुनुपर्छ। अन्य कुनै पनि कुकुर खेलौना टेरियर जस्तै हिंड्न नियमित गर्नुपर्छ।
एक सानो पाल्तु जनावर प्राप्त गर्न चाहे संदेह जो कोहीले, निम्न समीक्षा यी पशुहरू को धारकों पालन गर्नुपर्छ:
यस्तो pupils आफैलाई एक स्टूडियो अपार्टमेन्ट बसोबास गर्ने पनि एक व्यक्ति पाउन सक्छ। कुत्ता थुप्रै ठाउँमा लिन छैन।
धेरै कि-टेरियर्स अन्य जनावर संग एउटै कोठामा हुन सक्छ किनभने, वरिपरि चार खुट्टे सानो मित्र छ सजिला। उनीहरूले तिनीहरूलाई राम्रोसँग प्राप्त।
एक लघु कुकुर को सामग्री ओभरसाइजगरिएको कुकुर भन्दा धेरै सस्ता छ।
हाल लघु खेलौना टेरियर धेरै लोकप्रिय भएको छ। यो नस्ल प्रतिनिधिको लागि माग उच्च र स्थिर छ। घरमा साँचो आनन्द एक पिल्ला ल्याउनेछ। लघु Terrier आवश्यक सानो nimble कुकुर को सबै मालिकहरूको सामान्य राय पुष्टि गर्छ जो राम्रो, को लागि आफ्नो जीवन परिवर्तन।
गाई मा mastitis लागि प्रभावकारी एन्टिबायोटिक
डिस्कस: मर्मतका र रुचाउने
Gourami संगमरमर। Gourami माछा संगमरमर। प्रजनन र सामग्री
सामसुङ्ग ग्यालेक्सी नोट2नयाँ वर्षको लागि सबै भन्दा राम्रो उपहार छ!
Impatiens glandulifera, Impatiens वा ग्रन्थि: विवरण
वायु प्रदूषण को स्रोत
आर्मेनियाली मा Sauerkraut: कसरी एक खाजा तयार गर्न?
"AKVAMASTER" (नाक स्प्रे): प्रयोगको लागि निर्देशन वास्तविक
आफ्नो चयापचय कसरी पुनर्स्थापना?
नयाँ रेट्रो। Bezzerkalka सैमसंग NX3000
एक धुनमा लागि शिकार Skradke। धुनमा decoy। शिकार धुनमा सर्तहरू
नाम परिवर्तन गर्न रूपमा "स्कूलका साथीहरू" मा